२० महिनादेखि काबुलको होटलमा थुनिएका बालकुमार :: युवराज श्रेष्ठ :: Setopati
श्रीमती चिजा बालकुमारलाई फर्काउन लागि परेकी छन्
'बुबालाई देख्न पाउनुभएन, आमा सधैं पिर मान्नुहुन्छ। तपाईं कति पैसा-पैसा भन्नुहुन्छ?' चिजा फोनमा भनिरहेकी थिइन्, 'अब कामसाम गर्नुपर्दैन, खुरूक्क नेपाल आउनु।'
'बीस महिनासम्म नगरेको काम, अब पाइन्छ र! अझै आश राख्ने हो? खाली त्यही भन्ने,' उनले श्रीमानलाई भनिन्।
'एघार वर्ष भयो मैले यहाँ काम थालेको,' उनले भनिन्, 'अहिलेसम्म राम्रै छ। एकपटक कपडा सिलाउन आउने ग्राहक प्रायः हामीकहाँ नै आउनुहुन्छ।'
'यहाँ आएपछि कुनै समस्या परेको छैन। घरबेटीले कोठा छोड नभनेसम्म यहीँ बस्छु,' उनले भनिन्।
'एक पटक विदेश गएर पैसा कमाउँछु भन्नुहुन्थ्यो जतिखेर पनि,' चिजाले भनिन्, 'विदेश नै जाने हो भने अफगानिस्तान नभएर अरूतिर जान सकिन्थ्यो।'
'म वैधानिक तरिकाले अफगानिस्तान आएको होइन,' बालकुमारले हामीलाई फोन तथा भ्वाइस मेसेजमा भएको कुराकानीमा भने, 'काठमाडौंबाट दुबई हुँदै आइपुगेको हुँ।'
'दलालले सुरूमा जुन होटलमा ल्याएर राखेको थियो, त्यहीँ बसिरहेको छु,' बालकुमारले भने, 'बाहिर निस्कन त के, काबुल बजार कस्तो छ भनेर अहिलेसम्म देख्न पाएको छैन।'
'अरूले १५-२० लाख पठाएर काम पाएका छन् रे। मैले त धेरै दिन सक्दिनँ भनेँ,' चिजाले भनिन्, 'अफगानिस्तानको दलालले जसले धेरै पैसा दिन्छ, उसैलाई काम मिलाइदिने रहेछ।'
बालकुमारले पनि त्यहाँ बसिरहँदा यो कुरा बुझे। केही समयअघि काठमाडौंबाट अर्का दलालले युवाहरू अफगानिस्तान पठाउन लागेको थाहा पाएर ती युवालाई फोन गरेर बालकुमारले भनिदिएछन्, 'अहिलेसम्म काम पाएका छैनौं। होटलमा थुनिनुपरेको छ। तपाईंहरू नआउँदै ठीक होला।'
चिजाले आत्तिएर भनिन्, 'मेरो श्रीमानलाई अहिलेसम्म कसरी राखेको छ, के गरेछ। केही भइहाल्यो भने तपाईं जिम्मेवार हुनुपर्छ।'
दलालले सबै ठीकै छ, आत्तिनुपर्दैन भने पनि चिजाको मन थामिएन, 'होटलमा थुनिएका श्रीमानसँग लगातार पाँच-छ दिनसम्म सम्पर्क हुन नपाउँदा एकदम आत्तिएकी थिएँ।'
तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि बालकुमार बसेको होटलमा मान्छेको चाप बढेको छ। उनले भने, 'होटल भरिएको छ, नेपाली मात्रै १३ जना पुगिसक्यौं। यहाँका अरू होटलमा पनि नेपाली थुनिएका छन्।'
'होटलको आडमै पहिले अफगानी सेना ड्युटीमा बस्थे, अहिले त्यही अखडामा हतियारधारी तालिबानी बस्छन्,' बालकुमारले सुनाए।
'म बसेको होटलमा नेपालीसँगै अरू देशका नागरिक र अफगानीहरू पनि छन्। उनीहरू अमेरिका लगायत अन्य देश जान पाइन्छ कि भनेर दिनहुँ विमानस्थल पुग्छन्,' बालकुमारले भने, 'कहीँ जान नपाएपछि साँझ होटलमै फर्कन्छन्।'
'मैले त पहिल्यै जानुपर्दैन भनेकी। अहिले फेरि काम पाइन्छ कि भन्नुहुन्छ,' चिजाका आँखा भरिए।
'कुरा त बुझ्नुहुन्छ होला। तर मनमा अफगानिस्तान जाँदा लागेको खर्च समेत नउठाइ कसरी फर्कने भन्ने छ कि,' चिजा श्रीमानको अवस्था आकलन गर्छिन्, 'पैसा कमाउन गएको, उल्टै ऋण लगाएर फर्कन मन नलागेको हुनुपर्छ।
'पैसा भन्ने कुरा आउँछ जान्छ। यसको चिन्ता नलिनु भन्छु नि, मान्दै मान्नु हुन्न,' उनले भनिन्, 'मैले यहाँ यत्ति गरिरहेकी छु, किन पैसा भनेर मरिहत्ते गरेको होला।'
'बीस महिना नपाएको काम अब चाहिँदैन। मेरो मान्छेलाई काठमाडौं ल्याइदिनु भनेकी छु,' चिजाले भनिन्, 'हुन्छ त भनेको छ।'
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ३, २०७८, ०९:५१:००